तेस्रो संघीय न्यायाधीशले जारी गरेको छ नयाँ DACA सत्तारूढ। जबकि पहिलो दुई आदेशले भविष्यको लागि भविष्यको लागि पुन: खोलेको छ, यो आदेश सेप्टेम्बर,, २०१ since पछि पहिलो पटक हो कि होमल्याण्ड सुरक्षा विभागलाई पुनः लिन आदेश दिन सक्ने आशाको किरण छ। नयाँ DACA अनुप्रयोगहरू - र केवल नवीकरणहरू स्वीकार गर्दैन। यो योग्य Dreamers को लागी नयाँ अवसरहरु खोल्छ जो एक कार्य अनुमति बिना नै पूरा गर्न संघर्ष गर्दै छन् र आफ्नो सुरक्षा र स्थिरता को डर मा छन्। कुनै व्यावहारिक सपना ऐनले कress्ग्रेसमार्फत कदम नलगाएको खण्डमा, वर्तमान DACA कार्यक्रम मात्र प्रकाशको एक किरण हो।
अदालतको आदेश अनुसार - days ० दिन भित्र हामीले DHS र अदालतहरूबाट के थाहा पाउनेछ भन्ने बारे अझ बढी जान्नुपर्दछ। तर केवल प्रतीक्षाको सट्टा, हामी मद्दतको लागि कार्य गरिरहेका छौं धेरै व्यक्तिहरूले सकेसम्म उनीहरूको इमिग्रेशन स्थिति समायोजित गर्दछन्। बढ्दो आईसीई रेडहरू, विषाक्त तनाव र आप्रवासी परिवारहरूमा डर बढ्दै जाने क्रममा परिवार बिच्छेद भएको धेरै हृदयविदारक घटनाहरूबाट, हामीले अहिले नै सहयोग गर्नै पर्छ।
यो हामी कसरी विरोध गर्छौं: नयाँ र विस्तारित कार्यक्रमहरूको साथ जुन हाम्रो समुदायहरूको तत्काल आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। यो हाम्रो बोल्ने तरिका हो: हामी यहाँ छौं। हामी तयार छौँ। यहाँ एक इन्फोग्राफिक छ साझा गर्न सजिलो:
पुन: प्राप्ति गर्न:
DACA नवीकरणहरू स्वीकार गर्न जारी छ। यदि तपाईं नविकरण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, हामी यसलाई सकेसम्म चाँडो गर्न सिफारिस गर्दछौं। यदि तपाईंलाई आर्थिक सहयोग चाहिन्छ भने, हामी यहाँ छौं मद्दत गर्न.
होईन नयाँ DACA अनुप्रयोगहरू स्वीकार गरिदै छ (तर ध्यान दिनुहोस् - हामी अर्को १- months महिनामा थप जान्ने छौं)।
तपाईं आफ्नो अध्यागमन स्थिति समायोजन गर्न अन्य तरिकाहरूका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। हामी माध्यमबाट एक वकील संग कनेक्ट गर्न सिफारिस गर्दछौं Immi.org तपाईं कानूनी स्थायी निवास वा अन्य कार्यक्रमहरूको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ कि हेर्नको लागि।
हामी यसको बारेमा के गर्दैछौं:
0% ब्याज Offण प्रस्तुत गर्दै DACA, TPS, ग्रीन कार्डहरू, नागरिकता र क्यालिफोर्नियाका निवासीहरूको लागि अधिक। अझै सिक.
शुल्क सहायता र रेफरलहरू प्रदान गर्दै चरम आर्थिक कठिनाई सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई। थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
तपाईंको आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न होस्टि train प्रशिक्षणहरू (यदि तपाईंसँग वर्क परमिट छैन भने जागिर पाउनको लागि व्यावहारिक तरिका)। अब साइन अप गर्नुहोस्.
ज्ञान साझेदारी गर्नुहोस्: परिवार र साथीहरूलाई अब उनीहरूको DACA नविकरण गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् वा DHS ले केहि महिनामा नयाँ आवेदन स्वीकार्न सुरु गरेमा अब तयारी सुरु गर्नुहोस्।
आप्रवासीसँगै खडा हुनुहोस्! हामीलाई सहयोग गरेर यी कार्यक्रमहरू चल्दै राख्नुहोस् वा तपाईंको साथी र परिवारलाई दान गर्न प्रोत्साहित गर्दै। तपाईका साथीहरूसँग फन्डराइजर सुरु गर्नुहोस् वा फन्डराइजरहरूको टोलीमा सामेल हुनुहोस् र विश्वलाई सन्देश पठाउनुहोस् जुन तपाईं आप्रवासीहरूको साथ खडा हुनुहुन्छ!